Cunsuriyadaha Darajada SEO
Isniin, April 3, 2017 Isniin, April 3, 2017 Douglas Karr
Waxaan la shaqeyneynaa dhowr shirkadood oo aad u waawayn oo ku saabsan kor u qaadista muuqaalkooda raadinta dabiiciga ah hadda waana si dhab ah ula yaaban yihiin inta ay ka fiican tahay mashiinka raadinta hore. qarashka iyaga, iyaga oo aan helin. Waxay macno ahaan u bixin jireen shirkadaha waxyeellaynaya waxqabadkooda.
Hal shirkad ayaa dhistay beero xayeysiis ah ka dibna waxay soo bandhigeen bogag gaagaaban oo leh ereyo kasta oo isku dhafan oo la heli karo, iyo iskudhaf dhammaan bogagga. Natiijadu waxay ahayd jahawareer ka yimid domains, jahwareer sumadeed, iyo natiijooyinka mashiinka raadinta xun. Waxaan u haajirnay oo u wareejinay dhammaan cinwaanada hal, ka dibna waxaan u dhisnay bogag aad u xog badan oo mowduuc walba ah… 90 maalmood gudahoodna si fiican ugama sarreynno halkii ay joogeen.
Haddii la-taliyahaaga SEO uu yahay Hagaajinta waxay ka kooban tahay shaqo kasta oo ka baxsan soo jiidashada iyo hagaajinta khibrada booqdaha, waxaad u maleyneysaa inaad naftaada dhibaato ku hayso. Douglas Karr, DK New Media
Sawir-gacmeedkan oo ka socda Dot Com Infoway wuxuu qabtaa shaqo cajiib ah oo ah kala-soocid iyo mudnaan u siinta shaqada ay tahay inaad qabato haddii aad rajeyneyso inaad aragti hesho:
Ka jawaab celinta Mobilada - maadaama ay inbadan oo ka mid ah dadka isticmaala mashiinka raadinta ay isticmaalayaan mobilada, hubinta inaad u habeynayso adeegsadaha mobilada waa muhiim, oo ay ka mid tahay yareynta xawaaraha boggaaga moobilka iyo isticmaalka Google AMP.
Natiijooyinka Deegaanka - sanado ayaan wadaagaynay taas muuqaalka raadinta maxalliga ah wuxuu caawiyaa muuqaalka qaranka laakiin wali waa layaableh inta shirkadood ay iska indhatiraan fursadan weyn. Hubso in shirkaddaadu si sax ah ugu qoran tahay Google ee Ganacsiga isticmaalna xigashooyinka (NAP - Magaca, Cinwaanka, Lambarka taleefanka) bog kasta oo ka mid ah boggaaga.
Tayada Tayada iyo Iskuxirayaasha - halkani waa meesha lataliyayaasha waaweyn ay ku barwaaqoobaan kuwa xunna ay kugu dhibaateeyaan. Hadafkaagu waa inuu dhisaa waxyaabo aad u wanaagsan (sida infographics) oo aad u dhigto goobaha ku habboon ee muujiya (sida aan u qabanayno DCI). Infograafigani wuxuu qiimo u leeyahay dhagaystayaasheena sidaa darteed macno ayey u leedahay in lagu ammaano iyaga oo dib ugu laabta bogooda. Si kastaba ha noqotee, kaliya gelinta ad-hoc backlinks meelaha aan khusayn, meelihii tayada liitay meelna kuma gaadhsiin doonaan.
Istaraatijiyadaha Xayeysiinta - dhisida qaabab badan oo maadooyin ah (maqal, muuqaal, sawir-qaadis, sawir-qaadis, sawir-qaadis), garaacista tartankaaga, diidmada xiriirinta aan loo baahnayn, dhiirrigelinta tixraacyada calaamadaha, bixinta jawaabaha khadka tooska ah, soo saarista baraha bulshada, dhiirrigelinta cod raadinta iyo ka dhigista boggaaga taleefanka gacanta. dhammaan xeeladaha waaweyn si kor loogu qaado waxyaabahaaga.
Waa tan faahfaahinta, Cunsuriyadaha Qiimeynta Google SEO iyo Istaraatiijiyadaha Dhiirrigelinta ee 2017:
Tags: audiodib u xiridTansaniaDK New Mediadot com infowaygoogle ampgoogle ganacsigeygasababaha darajaynta googlegoogle + ganacsiraadinta maxalliga ahdarajaynta raadinta deegaankamuuqaalka raadinta deegaankaMacluumaadka SuuqgeyntaFiidiyowyada Suuqgeyntamikrograafigamagaca lambarka taleefankaDAYarrimaha saamayntaSEOxeelado xayeysiin aharimayaasha kala sarayntacilmiga bulshada
Toddoba Dhibaatooyin Dhibaato ah oo ku saabsan Ganacsiga Bulshada
Aug 12, 2011 at 9: 56 AM
Meelaha SEO-ga iyo arrimaha taraafikada ayaa ka sii badan. Dadka oo dhami waxay isku dayaan inay helaan darajo sare iyo gaadiid badan. Si aad u hesho waxyaabo badan oo taraafikada ah, erayga muhiimka ah, xawaaraha soo dejinta bogga dhammaantood waa lagu daray. Halkan waxaa ku yaal faahfaahin wanaagsan oo lagu falanqeynayo degel leh ereyo kala duwan.
adeega dhismaha seo
10, 2011 at 2: 29 PM
hehehe…. runtii waa jaantus aad u fiican, oo runtii xiiso leh, waa mid aad u cad…
Ahaanshaha lambarka koobaad maahan hawl fudud, waa inaad runtii noqotaa hal-abuur waana inaad diyaar u noqotaa inaad si dhab ah u shaqeyso.
Apr 6, 2017 at 12: 32 AM
Jacaylka infographic ah! Waad ku mahadsan tahay maqaalkan cajiibka ah ee Douglas! Waxaan isweydiinayay, miyaad u maleyneysaa in martida martida loo soo dirayo sidii istiraatiijiyad dhisid isku xira ay wali waxtar u yeelan doonto sanadkan?
Apr 6, 2017 at 12: 35 AM
Haa… laakiin ka madbacad ahaan runtii waxaan ku daalayaa maqaallo dameer nus ah oo ay dadku isku dayayaan inay ku xirxiraan xiriirin boggeyga. Wax dhibaato ah kuma qabo xiriiriyaha marka macluumaadka ay yihiin kuwo la yaab leh oo qiimo ugu leh dhagaystayaashayda. Wax kasta oo kale waa uun cay, in kastoo.
Apr 6, 2017 at 8: 52 AM
Waa inaan kugu waafaqaa 🙂 laakiin marwalba waxaa jira waxyaabo ka reeban. Haddii maqaalka si wanaagsan loo qoro oo qiimeeyo, xiriiriye waxba ma yeeli doono.
Apr 18, 2017 at 11: 04 AM
Xiriirada tayada liidata runtii awooddo dhaawacay, in kastoo!